भारतीय चन्द्र अभियान असफल ! विक्रमसँगको सम्पर्क टुटेको आशंका Gorkha Samachar
भारतीय चन्द्र अभियान असफल ! विक्रमसँगको सम्पर्क टुटेको आशंका
गोरखा – भारत सरकारको चन्द्र अभियान असफल भएको छ । भारतले चन्द्रमामा पठाएको विक्रम नामक चन्द्रयान २ चन्द्रमा सतहमा पुग्नु केही बेर अगाडी सञ्चार सम्पर्क टुटेको छ ।
यो सहित भारतको चन्द्रमा सम्बन्धी खोजको दोस्रो पटकको प्रयास असफल भएको छ ।
विक्रम चन्द्रमाको सतह भन्दा २ किलो मिटर १ सय मिटर नजिक पुग्दा सम्म पनि समान्य रहेको भए पनि यानको पृथ्वीमा रहेको नियन्त्रण कक्षसँगको सम्पर्क अचानक टुटेको सिएनएनले जनाएको छ ।
भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष के सिभानले विक्रम संग सञ्चार सम्र्पक टुटेको पुष्टि गरेको छ । सिभानका अनुसार विक्रमको सूचनाहरूको विश्लेषण भए पछि मात्र के भएको थप जानकारी गराउन सकिने बताए ।
विक्रमले शुक्रबार राती नेपाली समय २ः१० बजे चन्द्र सतहमा पाइला टेक्ने तयारी गर्दै थियो । यसै बिच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैज्ञानिकहरुलाई हरेश नखान भन्दै आगामी दिनमा पनि अन्तरीक्ष कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।